နမ့်တာလုံးက သိပါသည် ~ Shannilay
ဒီနေ့  ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနှစ်တုို့ တက်လှမ်းလုိုကျတဲ့ တုိုင်းရင်းသားညီအကုို မောင်နမများခင်ဗျာ မိမိဒေသမိမိလူမျိုးအတွက် မည်သူမဆုို ဖွံ့ဖြိုးတုိုးတက်လုိုသည့် ဆန္ဒရှိနေကြသည်မှာ မလွဲမတွေပါ။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနှစ်အရ မိမိဒေသတုို့ အခြားလူမျိုးများ လွမ်းမုိုးအုပ်ချုပ်လုိုသည်ကုိုလည်း မည်သူမဆုို လက်ခံမည်မဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။ ထုို့နည်းတူစွာ မိမိသည်လည်း အခြားသူများဒေသတုို့ အုပ်ချုပ်လွမ်းမုိုးလုိုစိတ်ခဲ့လျှင်လည်း ဖက်ဒရယ်ကုို ဆန့်ကျင်နေသည်ဖြစ်ကြောင်းကုို သတိမှုသင့်ပါသည်။
ဒီနေ့ နည်းပညာနဲ့ မီဒီယာခေတ်ကြီးမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာသေးငယ်သွားလုို့ ဒီမုိုကရေစီနှင့်လူအခွင့်ရေး ဟာလည်း တပြိုင်ထဲ လေးစားလုိုက်နာရမည့် အချိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဒီမုိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဟာ အများသဘောဆန္ဒပါ..
ကျနော်လက်လမ်းမှီသော ကျနော်တုို့ ဘုိုးဘေးများ မှတ်တမ်းတင်ရေးထားခဲ့တဲ့ ပုရပုိုက်၊ စာစောင်တွေထဲက ဇင်္ဂလိန်းခန္တီးနဲ့ ဟုမ္မလင်းမြို့ အကြောင်းလေးပါ ..
ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးမြို့ လေး မဖြစ်ပေါ်ခင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပါင်း (၇၀၀) ကျော်က သျှမ်းလူမျိုးများသည် တမျိုးနှင့်တမျိုး နယ်မြေသစ် ချဲ့ထွင်ကြရင်း အချင်းချင်း မသင့်မမြတ်မှုများ အကြိမ်ကြိမ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထုို့ကြောင့် မုိုးကောင်း သျှမ်းဘုရင်မင်းမြတ် (သျှမ်းတုို့က စ၀်ဖှမိန်းကောင်း) စောစန္ဒာ (သျှမ်းတုို့က စ၀်ဖှလုံ မိန်းကောင်း စ၀်စန်တာ) က နယ်မြေချဲ့ထွင်မှုအတွက် ဟူးကောင်းလွင်ပြင်တွင် ယခင်က နေထုိုင်ခဲ့ကြသော အုိုက်တာခမြန် များကုိုတုိုက်ထုတ်ပြီး ခန္တီးလုံပြည်ကြီးကုိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဟူးကောင်းဆုိုသောစကားမှာ ( မုိုင်းကောင်း ဘုရင်မင်းမြတ် စည်တော်ဗဟုိုခေါင်း လည့်သောအရပ် ဟုို -သည် ခေါင်း ကောင်းသည် စည် စည်တော်ဗဟုို ထားသောအရပ်လုို့ အဓိပ္ဗါယ်ရပါသည်။
ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးမြို့ နင့် ပတ်သက်၍ ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးမြို့သည် ကျနော်တုို့ ဒေသခံသျှမ်းတုိုက နမ့်တာလုံးဟုခေါ်သော ချင်းတွင်းမြစ် အရှေ့ဖက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ခန္တီးစော်ဘွားကြီး နန်းစုိုက်ရာမြို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၉၆ ခရာဇ်သက္ကရာဇ် ၁၇၈၁ မြန်မာဘုရင် ဘုိုးတော်ဘုရားလက်ထက်၌ ၀စ်ညီခေါင် ခေါင်းဆောင်သည့် ခန္တီးလုံကြိန်း သျှမ်းမျိုးနွယ်တစုသည် ခန္တီးကြီး (သျှမ်းလုိုခန္တီးလုံ) ပူတာအုိုမြို့ မပေါ်ပေါက်ခင် ယင်းဒေသမှ ဆင်းလာကြပြီး ယခုခန္တီးမြို့စေတီတော် တည်ရှိရာ ကုန်းတော်နေရာအနီးတွင် ခန္တီးမြို့ဟု တည်ထောင်ပြီး နေထုိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဘုိုးတော်ဘုရားမှ စ၀်ညီခေါင်အား ခန္တီး လုံကြိန်းသျှမ်းအမျိုးနွယ်များ အခြေစုိုက်ရာဒေသနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်ကုို အပုိုင်းစားရန် စော်ဘွားအဖြစ် အသိမှတ်ပြုခဲ့သည်ဟု ခန္တီးမြို့နယ် မှတ်တမ်း စာမျက်နှာ (၆ဂ) တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ခန္တီလူမျိုးများသည် မှုလဆင်းသက်လာရာ ပူတာအုိုခေါ် ခန္တီလုံသည် ခန္တီးကြီးဖြစ်၍ ဇင်္ဂလိန် ခန္တီး ဟုသျှမ်းစကားဖြင့် သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်သည် ဟုဆုိုသည်။ ဇင်္ဂလိန် ဟူသော မသံထွက်ကုိုမှု ခန္တီးနှင့် သျှမ်းနီတုို့ က ဆန်ကလိန်ဟု အသံထွက်သည်။ ဆုိုလုိုသည်မှာ အငယ် သုို့မဟုတ် လက်နက်နုိုင်ငံငယ်လေးဟု ဓိပ္ဗါယ်ရ၍ အထက်ပူတာအုိုဒေသတွင် ခန္တီးလုံခေါ်သော ခန္တီးကြီး ရှိနေတာကြောင့် ဇင်္ဂလိန် ခန္တီး၊ ခန္တီးငယ်ဟု ခေါ်ဆုိုခြင်းဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ၆၇ အရဖေါ်ပြရာတွင် ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးကုို အခေါ်နောက်ထပ်တမျိုးမှာ ဇင်္ဂလိန်းအမည်သည် ဇလုပ်လူမျိုး၏ စကားအရ မုိုးမခပင်၊ အဓိပ္ဗါယ်ရ၍ မုိုးမခပင်ပေါက်ရောဒေသ ခန္တီးဟုခေါ်ဆုိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်ကုိုတွေ့ရသည်။
ခန္တီးမြို့၏ နောက်ဆုံး စော်ဘွားကြီး စ၀်မြစိန် သသည် ၁. ၂. ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှစ၍ စော်ဘွား အာဏာကုို စွန်းလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ မြသိန်းတန်စေတီတော်ကြီး လည်းယနေ့တုိုင် သက်သေရှိနေပါသည်။
ခန္တီးမြို့တည်ထောင်ခဲ့သည်နှင့်အမျှ အရှေ့ဖက်မှ လုံကြိန်းက နမ့်တာလုံး (ချင်းတွင်း) မြစ်ရုိုးတလျောက် ရွာငယ်များ တည်ထောင်ပြီး အများမပြား နေထုိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။
မနုဿကျော်ဝင်း ရေးသားပြုစုသည် နောက်အော် နာဂစာစောင်၊ စာမျက်နှာ (၇)၊ စာပုိုဒ် (၃)တွင် ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးမြို့ အပါဝင် ချင်းတွင်း မြစ်ရုိုးတလျောက်တွင်မှုကာ သျှမ်းနီများ နေထုိုင်ကြသည်ဟုပါရှိပါသည်။ မည်သုို့ပင်ရှိစေကာမှု လူမျိုးစုတခု အားနည်းနေ လျင်အခြားလူမျိုးစုများ ၀င်ရောက်နေထုိုင်လာမည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ဇင်္ဂလိန်ခန္တီးမြို့ မဖြစ်ပေါ်မှီ အခြားလူမျိုးများလည်း ရှိလျင်လည်း ရှိနုိုင်သည် သေခြာသည် သေခြာသည်တခုတော့ ဇင်္ဂလိန်ခန္တီးမြို့ ကုို သျှမ်းတုို့တည်ခဲ့လုို့ သျှမ်းစော်ဘွားများ နောက်ဆုံး အာဏာစွန့်ရချိန်ထိ နေထုိုင်ကြောင်း စာပေမှတ်တမ်းအရသိရသည် ယနေ့တုိုင်လည်း သျှမ်းနီလူမျိုးများ အများဆုံးနေထုိုင် နေကြသည်ကုိုလေးတွေ့ရပါသည်။
သျှမ်းတုို့ နမ့်တာလုံးခေါ် ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းပေါ်ရှိ မောင်းခမ်းရွာ နှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြလုိုပါသည်။ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟုိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ဝေထားသည့် ၁၃၃၆ ခုနှစ် ပြာသုိုလ ဝေသာလီ (သျှမ်းလုိုဝေဆာလီ) အာသံလူမျိုးများ ယခု မောင်းခမ်းရွာ၏ တောင်ဖက် (၁) မုိုင်ခန့်အကွာရှိ ချောင်းဘေးတွင်တည်ထောင်နေခဲ့ကြပါသည်။ တဖြည်းဖြည်း လူဦးရေတုိုးပွားပြားများ လာသောအခါ မြို့ငယ်ဖြစ်လာ၍ သျှမ်းဘာသာဖြင့် မုိုင်းနွဲ့ ဟုခေါ်ဆုိုကြပါသည်။ ထုို့နောက် မုိုင်းနွဲ့၏ မြောက်ဘက် (၁)မုိုင်လောက် အကွာရှိ မြေကမှုကြီးနေရာမှ ရွှေထွက်သဖြင့် လည်းကောင်း နေရာသုို့ ပြောင်းရွေ့နေထုိုင်ကြပါသည်။ လည်းကောင်းနေရာကုို သျှမ်းဘာသာအားဖြင့် မောင်းခမ်း ဟုခေါ်သည်။ မောင်းသည် - မောင်း၊ ခမ်းသည် - ရွှေုဖြစ်ကြောင်း ဦးဖုိုးအုို၏ ပြောဆုိုချက်ကုို ရေးသားထားပါသည်။
သမုိုင်းထဲက ပိန္နဲရိပ်မြို့ ကလေးကတော့ သျှမ်းလူမျိုးတို့၏ နေရာဒေသ တခုဖြစ်သည့် မြို့ကြီးများတွင် ယနေ့အချိန်၌ ထင်ရှားသော ဒေသ တစ်ခုမှာ ဟုမ္မလင်း (၈ှုင်းမ၊ဂ်,လ၊င်း) ဖြစ်သည်။
ဟုံး (၈ှုင်း) = ညောင်(ဝါ)အရိပ်၊ မလင်း (မ၊ဂ်,လ၊င်း) ပိန္နဲ ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် အဓိကရ ပေါက်နေသည့် ညောင် ပိန္နဲပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ (၈ှုင်းမ၊ဂ်,လ၊င်း) ဟုန်းမလင်း ဟု ဒေသခံ သျှမ်းတို့ မှည့်ခေါ်ထားသည်။ သျှမ်းရွာငယ် တစ်ရွာအဖြစ် စတင်ခဲ့သော မြို့ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် “ဟုမ္မလင်းအစ ခေါင်ခမ်းက” ဟု ဆိုရ လောက်အောင် “ခေါင် ခမ်း” ကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဖြစ်၍ မိုးညှင်းခေတ်ဦးကပင် ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့တုိုင် သျှမ်းနီလူမျိုးများ အများဆုံးနေထုိုင်ကြသည်ဟုဖေါ်ပြသည်။
သျှမ်းလူမျိုးများသည် ဗု ဒ္ဓဘာသာကုိုသက်ဝင် ယုံကြည်သူများ ဖြစ်သည့် အလျှောက် ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် အေးအေးလူလူ နေထုိုင်လုို စိတ်သဘော ရှိသူများပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့နုိုင်ငံ သမုိုင်းကုိုရေးလျှင် သျှမ်းမပါလုို့ မပါ။
ဒေသခံ သျှမ်းနီ အဖုိုးအဖွားများရဲ့ ဒီရုိုးရာအ၀တ်အစားဟာ ကုလားဖြူများ မရောက်ခင်ထဲကဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် ကုိုလုိုနီ ကုလာဖြူများသည် မြန်မာနုိုင်ငံအား သိမ်းပုိုက်ပြီးနောက် တောင်ပေါ်နဂအမျိုးသား နယ်မြေများကုို 1896 ခုနှစ် ချင်းတောင်တန်း ဥပဒေ ( The Chin Hills Regulation 1986 ) ထုတ်ပြန် ကြေညာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး သောင်သွပ်နှင့် ခန္တီးစော်ဘွားနယ်အား (The Hsawnghusup and Singkling Khamti Aet , 1926 ) သောင်သွပ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးဥပဒေ ကြေညာထုတ်ပြန်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ် ကုိုလုိုနီကုလာဖြူများသည် ခန္တီးစော်ဘွားနယ်အား အထက်ချင်းတွင်းခရုိုင်မှ ခွဲ၍ တောင်ပေါ် ဒေသအပါဝင် နာဂတောင်တန်းခရုိုင်အဖြစ် 1939 ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။အင်္ဂလိပ် ကုိုလုိုနီ ကုလာဖြူများသည် မြန်မာနုိုင်ငံအား သိမ်းပုိုက်ပြီးနောက် တောင်ပေါ်နဂ အမျိုးသား နယ်မြေများကုို 1896 ခုနှစ် ချင်းတောင်တန်း ဥပဒေ ( The Chin Hills Regulation 1986 ) ထုတ်ပြန် ကြေညာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး သောင်သွပ်နှင့် ခန္တီးစော်ဘွားနယ်အား (The Hsawnghusup and Singkling Khamti Aet , 1926 ) သောင်သွပ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီးဥပဒေ ကြေညာထုတ်ပြန်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ် ကုိုလုိုနီကုလာဖြူများသည် ခန္တီးစော်ဘွားနယ်အား အထက်ချင်းတွင်းခရုိုင်မှ ခွဲ၍ တောင်ပေါ် ဒေသအပါဝင် နာဂတောင်တန်းခရုိုင်အဖြစ် 1939 ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
1952- ခုနှစ် နုိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ ခန္တီးစော်ဘွား စောဝ်မြစိန်သည် စော်ဘွားအာဏာကုို စွန့်လွတ်ခဲ့ရသည်။ 1952- ခုနှစ် နုိုဝင်ဘာ (၃၀)ရက်နေ့မှစ၍ အာဏာစွန့် လွတ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကျနော်တုို့ ဒေသခံ သျှမ်းများသည်လည်း သျှမ်းဆုိုလျှင်နီနီပြာပြာဝါ၀ါ သျှမ်းတမျိုးထဲရှိသည်ဟု လက်ခံသူများ ပင်ဖြစ်သည်။ တုို့ပေမဲ့ ကျနော်တုို့ ငယ်စဉ်ကျောင်းနေတုန်းအခါမှာ တာဝန်ကျ ၀န်းထမ်းသား သမီးများ ပြောင့်ရွေ့ ရောက်လာပါသည် ဘာလူမျိုးလည်းဟုမေးရင် သျှမ်းလုို့ပြောလုိုက်ရင် ဘာကြောင့်ကချင်ပြည်မှာ ရောက်နေတာလည်း သျှမ်းပြည်နယ်မှာမနေဘူးလား ဒီမှာမွေးသာလား မိဘတွေကရော ဘယ်ဇာတိလည်း စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းစုံ၍ ဘယ်ကစလုို့ ဘယ်ကဖြေရမှန်းမသိပါ။
ကျနော်နည်းနည်း နားလည်သိတတ်လာသော အခါ ကျနော်တုို့ ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာ ထဲက သမုိုင်းဟာ အတုကြီးပါလား၊ ပြည်ထောင်စုကြီးကရော,,, ယနေ့ပြည်နယ်တွေကရော ,,,, တုိုင်းတွေကရော,,,,
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကုို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနှစ်ဖြင့် ချီတက်လုိုကြသော တုိုင်းရင်းသား ညီအကုိုမောင်နမ များသည် ဒီမုိုကရေစီနဲ့ လူအခွင့်ရေးကုို လေးစားလုိုက်နာ ယုံကြည်ကြမည်ဟု မျော်လင့်ရင်း ဒီမုိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရဟာများအတွက် စစ်မှန်သော ရွေးချယ်တင်မြောက် ဆုံးဖြတ် အုပ်ချုပ်ပုိုင်ခွင့်များရှိကြပါစေလုို့ ဆုတောင်းရင်း.... ချစ်သောစာဖတ် ပရိတ်သတ်များအား လေးစားလျက် ကျားပေါက်